Matte Black Centerset Faucet fandroana
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa / WOWOW Matte Fandroana Fandroana Mainty 4 Inch Centerset
naoty 4.93 avy tany 5 mifototra amin'ny 28 mpanjifa naoty
(28 mpanjifa famerenana)
Ny wowowfaucet dia manolo-tena amin'ny fanomezana vokatra avo lenta sy azo ampiharina. Ny poketra mando fandroana maoderina dia misy torolàlana fametrahana matihanina. Tsotra ary mora apetraka ny fametrahana.
2321200B torolàlana fametrahana
WOWOW faucet fandroana fandroana mainty 2321200B fitaovana voafantina tsara, fitaovana matevina, faharanitan-tsaina, famokarana mazava tsara, sandam-bola tanteraka. ny fonosana rehetra dia alefa amin'ny alàlan'ny serivisy ara-toekarena na mahazatra an'ny UPS na USPS, miaraka amin'ny antoka telo taona, ary voahodina ao anatin'ny 1 andro fiasana mba hahazoana antoka fa ho tonga haingana!
2 Mikarakara Faucet amin'ny fandroana: famolavolana 2 mahazatra ho an'ny fifehezana ny rano sy ny mari-pana, ny haben'ny 4-inch ary ny lavaka 3-lavaka ho an'ny ankamaroan'ny lovia sy fantsakana; Ampiasaina amin'ny Assembly Roding Lift Rod; Andalana mitokana amidy mitokana
2 HANDLES FAUCET BATHROOM: rano mafana sy mangatsiaka: Tariby serafima-dronono, baoritra namboarina amin'ny baoritra misy seramika ambony dia mihodina milamina mba hiantohana ny fampiasana maharitra mandritra ny fotoana tsy itetezana rano sy leakage, ary mifehy tsara ny mari-pana ny rano.
Ny kalitao sy ny fitaovana: fametahana baoritra NSF fanamarinana avo lenta dia drip-droa ary tsy misy firaka, azo antoka ny fenitry ny rano; Fitaovana: zinc alloy / stainless vy / vy
BASIN FAUCET HIGH QUALITY: ABS aerator dia miaro rano 50% sy anti-splatter. Ny baoritra misy seramisy tsy misy rano dia maharitra. Mofomamy avo lenta miaraka amin'ny tongotra varahina, vy matevina, akorandriaka ivelany, mateza.
VANITRANO VOLONY VAVOLOMBELON’NY FIVORIANA 3 TAONA: Aza misalasala mifandray aminay raha misy fanontaniana. Hamaha ny olanao haingana araka izay azo atao izahay.
SKU: 2321200B Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa Tags: 2 Fehifehy, 3 Holes, Black
Varahina boribory / mainty
Firaka zinc / vy tsy misy fangarony
Faucet * 1, famaritana famaritana * 1, tampon-tsakan-tsofina Pop-up * 1
T *** h2020-02-05
Tiako ireto faucet ireto! Vidiny kokoa noho i Lowe sy Home Depot izy ireo ary tena tsara tarehy. Tena tsara koa ny tsindry rano.
*** B E2020-03-02
faucet matanjaka be dia be. Nanana iray nandritra ny herintaona teo isika. Manangana izahay izao ary mividy roa hafa ho an'ny tranonay.
*** O R2020-03-05
Mbola miasa tsara herintaona aorian'ny fametrahana. Fampiasana isan'andro, tsy misy fambara.
I *** D2020-03-09
Zavatra tena tsara sy tsara kalitao. Toa tsara ao an-trano fidiako any amin'ny fivarotana vola bebe kokoa no hovidiko ho an'ny tranoko iray hafa, miaraka amin'ny bokotra Push rehetra hampijanonana ny rano avy amin'ilay fantsakana taloha izay nanana izany.
J *** f2020-03-12
Tiavo ity faucet ity ary ny ampahany tsara indrindra dia ny pop up drain, mora kokoa ny miditra ao anaty fantsonako ity faucet ity ary miasa tsara izy io.nidy ary endri-javatra mahafinaritra fotsiny.
Fitaovana tsara kalitao sy ny vidiny mirary, izaho dia hanome soso-kevitra ity faucet fandroana vokatra ity
M *** S2020-03-13
Tonga lafatra fotsiny. Sarany lehibe, tsy mila mandany vola adala ao amin'ny Home Depot. Tena kanto, maoderina ary mora ampiasaina izy io. Tiako izany, mahatonga ny fandroako ho tsara tarehy.
M *** S2020-03-18
Tiako ny haavony ary mankao afovoan'ny falehan-drano izy io no mipetraka. Ny fiafarany / loko dia tsara. Ny fanamorana ny fampiasana ny tahony dia tsara sy mora ihany koa. Hividy iray hafa ho an'ny efitra fandroako hafa aho.
Tena afa-po amin'ity vokatra ity. Mora ny mametraka azy, manana endrika maoderina tsara ary miasa tanteraka farafaharatsiny amin'izao fotoana izao. Vokatra tsara ho an'ity vidiny ity.
Gaga tamim-pifaliana tamin'ny kalitaon'ny faucet sy ny fametrahana azy mora kokoa. Mifanentana tanteraka amin'ny fanoloana ilay taloha ny zava-drehetra, indrindra fa ny plumbing dia tsy asa ankafizintsika. Raha ny mahazatra dia mila manao dia lavitra isika hahazoana ampahany. Nandeha tsara izany.
Ny iray amin'ireo faucet tsara indrindra azon'ny vola vidiana. Nahazo an'io antsasaky ny tadiavin'ny magazay io aho ary nahatsapa sy tsara kokoa noho izy ireo. Tena hividy indray
Vokatra tena tsara sy matanjaka. Lehibe ny plug ary manarona ny lavaka fantsakana iray manontolo (aza miditra ao anaty tatatra fotsiny).
*** E E2020-04-10
Tena tianay ny vokany aorian'ny nametrahana ity. Ny vokatra dia kalitao tsara sy fonosana tsara. Izy io dia miaraka amina sombin-javatra 2 misaraka: faucet misy tahony, ary ampahany atiny. Tsotra ny mahatakatra izay mandeha amin'ny toerana hametrahana tsy misy torolàlana.
Miorina amin'ny vy izy io fa tsy plastika, ary tena mateza, tsara endrika ary miasa. Torohevitra avo lenta ity vokatra ity raha mila soloina faucet mandro any amin'ny trano fidiovana RV ianao. Hisafidy ity marika ity indray aho rehefa tonga ny fotoana fanoloana ny fantsom-palatra an-dakozia tsy misy fanontaniana.
V *** f2020-04-19
Tena matanjaka amin'ny kalitao izy io. Mora & tsotra hapetraka. Izany no antony ahazoako ny roa amin'izy ireo hanolo ny volo. Tena tsy mieritreritra ny vidiny izay latsaky ny $ 35 ianao. Wow, ny soatoavina miaraka amin'ny kalitao no tsara lavitra noho ilay $ 50 na mihoatra novidiko tamina magazay teo an-toerana (Home Depot, Lowes…)
Mora apetraka amin'ny zava-poana vaovao. Mahafinaritra ny fikorianan'ny rano! Naharitra 10 minitra ny fametrahana! Tena mety izany ao amin'ny efitrano fidiantsika. Tianay ny fiasa izay ahafahantsika mifehy ny hafanana sy ny hatsiaka amin'ny fotoana iray. Izy io dia niaraka tamin'ny faritra rehetra ary tsotra ny torolàlana
Ity dia faucet mijery tsara izay voaorina tsara. Toa faucet anarana marika mahazatra kokoa io, saingy ambany sy ambany ny vidiny. Tonga miaraka amin'ny cartridges vita amin'ny seramika mahafinaritra izay mamadika / mamono ny valves amin'ny dime tsy misy famoahana na inona na inona. Misy aerator namboarina izay manaparitaka ny habetsaky ny rano tsy miteraka tabataba na feo mikorontana. Ny famaranana nikela borosy dia mandeha tsara amin'ny filentehako.
15 minitra fotsiny no nametrahako ity tamin'ny zava-poana vaovao. Tiako ny fantson'ny pop up, izay mora kokoa ny mametraka azy noho ny tatatra miala. Ny faucet izay nentiko dia vita amin'ny varahina avo lenta. Vita vita tsara sy mafy izy io, haharitra mandritra ny fotoana lava. Ary tsara ihany koa ny vidiny. Hividy roa hafa aho hanoloana ny fandroako hafa.
H *** f2020-04-28
Tena manintona, mora atambatra ary tsy mitete. Ny hany fampitandremana dia ny fivoahan'ny rano amin'ny tsindry kely. Tsy mila mihodina fotsiny ianao raha te hahazo rano be.
Ho an'ny tompoko fandroana io, ny ahy am-boalohany dia mitete be, ka nanapa-kevitra ny hanana iray vaovao amin'ny bikana aho. Ka hanana fomba vaovao ho an'ny trano fidiako aho. mora be ny mametraka, tsara kalitao, ary mino aho fa tsara kokoa noho ny vokatra mitovy amin'ny vidin'ny Lowe's na Home Depot. Nojereko ireo magazay roa ireo, ary lafo be ny faucet ao, 70 eo ho eo ny ankamaroan'izy ireo. WOWOW dia manana kalitao mitovy amin'izany amin'ny vidiny ao amin'ireo magazay roa ireo.
Tena tiako ity faucet ity. Mora ny nametraka. Mifanaraka tsara amin'ireo arimoara ao amin'ny trano fidiako io. Faly be aho nividy azy. Tena takatry ny volany. Tsy azoko antoka hoe haharitra hafiriana ny faharetany fa toa mety hanana faharetana maharitra mandritra ny taona maro izy io.
Mametraka mora be. Kalitao tsara. Ento fotsiny aho 10min hanovana azy. Mivoaka haingana sy mahery ny rano. Tena mendrika izany.5stars
H *** f2020-05-25
Fifanarahana tsara izany. Ny faucet dia ho an'ny efitrano fidiako any ambanin'ny tany. Manam-potoana hametrahana an'io aho anio. Tiako ny famolavolana momba ny faucet ary mora ny mametraka azy. Kivy kely fa somary mavesatra ihany izy. Angamba midika kalitao avo lenta izany.
Sarobidy tena mahavariana - kalitao tsara, fanamorana fametrahana, fomba fanao. Faly be aho tamin'ity fividianana ity. Faucet tsara sy avo lenta.
Fonosana matihanina. Faly be aho, manodidina, miaraka amin'ity vokatra ity hatramin'ny fividianana ka apetraka. Misaotra anao. Tena sanda lehibe io ary mora apetraka. Tery sy mafy ny zava-drehetra.
Niasa ho an'ny fanoloana zava-poana tao amin'ny fandroana haingana dia halefa indray
R *** f2020-06-27
Entana lehibe. Mametraka mora be. Tiavo ny doro-drano Tena malama.
R *** f2020-07-04
Fametrahana tsotra, tsy natsangana tsy ho ela, vokatra rano fanamiana, mora ampiasaina ary ny endrika endrika manintona dia marefo, effcade tena tsara tarehy dia tena tsara, mazava be ny rano, be loatra ny zaza, be koa ny andro. tsara, manosotra lafiny rehetra dia tena mety, ary ny ankamaroan'ny fitaovana vaovao
Ity faucet ity dia tsara ho an'ny fandroako. Manana tahony izy ary mora jerena raha mangatsiaka na mafana. Mora ampiasaina ihany koa izy ary tian'ny fianakaviako manontolo.
Fandroana amin'ny efitra fandroana Chrome WOWOW miaraka amin'ny fivoriambe
MIFANDRAISA AMINAY Adiresy USA: 8 THE GREEN STE A, KENT, DOVER CITY, DE, 19901. USA Telefaona: 3476134901 E-mail: sales@wowowfaucet.com